Ulwalamano lwe-Hyperbaric - Unyango lwe-Oxygen Oxygen HBOT
ikhaya/Malunga neTekna Hyperbaric/Ulwalamano lwe-Hyperbaric - Unyango lwe-Oxygen Oxygen HBOT
Ulwalamano lwe-Hyperbaric - Unyango lwe-Oxygen Oxygen HBOTteknamfg2018-01-04T18:19:33+00:00
Ikholeji yaseMerika ye-Hyperbaric Medicine
I-ACHM yindawo yoluntu eqeqeshelwa ukusetyenziswa ngokufanelekileyo, imigangatho yononophelo, imfundo, uqeqesho, isatifikethi kunye nokuqatshelwa kwayo ngonyango lwe-oksijeni yonyango njengokhethekileyo lwezonyango.
I-American College ye-Hyperbaric Medicine yasungulwa kwi-1983 ekuxhaseni iiklinikhi ezenza imithi ye-hyperbaric eyayiqonda ukubaluleka kwe-oksijini yonyango kwizicelo zekliniki, ngokukodwa ukuphathwa kwezilonda.
Iintlobo zeAlert Network
IDAN Medical ulwazi Abasebenzi beSebe i-24-yeeyure zexesha eliphuthumayo kunye neenkcukacha zokuphucula ukuhamba, ukuchonga ulwazi lwezobisi kunye nokudluliselwa kwezonyango.
Uphando kunye nophando yi-genesis yencazelo yesayensi. I-Rubicon Foundation iqalise iiprojekthi ezifaka isandla ekwandiseni ukuqonda kwabantu.
KwiCaribbean Hyperbaric Medicine
I-Caribbean Hyperbaric Medicine iqulunqe kwaye ilawula izifundo ezi-5 ezigunyazisiweyo ze-hyperbaric (ezivunywe yi-National Board of Diving kunye ne-Hyperbaric Medical Technologies kunye ne-American College of Hyperbaric Medicine). Ezi zifundo zisetyenziswe ngamazwe ngamazwe kunye noogqirha kunye nabanye abaqeqeshiweyo bezempilo ukuncedisa ukuqinisekiswa kwe-hyperbaric ezifunekayo ukuba banikezele unyango lwe-hyperbaric kwizigulane.
I-Caribbean I-Hyperbaric Medicine inikezela ngezifundo ze-12 ezivunywe yi-Diver's Alert Network (DAN)
Iinjongo ze-Veterinary Hyperbaric Medicine Society kukuqhubela phambili isayensi kunye nesicelo seklinikhi yonyango lwe-hyperbaric kwizilwanyana kunye namayeza oluntu ngokukhuthaza imfundo, ukufumanisa kunye nentsebenziswano.